यी अभिनेत्रीको आफ्नो एकाउन्टको पैसा ट्रान्सफर भएपछि…. | Screennepal
यी अभिनेत्रीको आफ्नो एकाउन्टको पैसा ट्रान्सफर भएपछि….
२०७४, १४ चैत्र बुधबारscreennepalfeature, Sliver screen0
मुम्बई, १४ चैत (एजेन्सी) । भारतीय टेलिभिजनको चर्चित शो ‘साथ निभाना साथिया’मा गोपी बहूको भूमिकामा देखिँदै आएकी अभिनेत्री देवोलिना भट्टाचार्जी बैंक फ्रडको शिकार भएकी छन् । उनको एकाउन्टबाट १६ हजार रुपैयाँ ट्रान्सफर भएर गएको छ ।
‘बलिउड लाइफ’को रिपोर्टअनुसार यी अभिनेत्रीले आफू ठगिएको खुलासा गर्दै भनेकी छन्, ‘आज बिहानै मलाई मोबाइलमा म्यासेज आयो । जसबाट मैले आफ्नो एकाउन्टबाट १६ हजार रुपैयाँ ट्रान्सफर भएको थाहा पाएँ । मैले ेही सपिङ पनि गरेको थिइनँ । त्यसपछि मेरो एकाउन्ट ह्याक भयो भन्ने थाहा पाएकी हुँ ।’
यी अभिनेत्रीले भनिन्, ‘मेरो त्यो १६ हजार सन फ्रान्सिस्कोमा ट्रान्सफर भएछ । त्यसपछि मैले आफ्नो बैंक एकाउन्ट ब्लक गरेँ ।’ उनले आफ्नो क्रेडिट कार्डप्रति सावधानी रहन समेत आग्रह गरेकी छन् । यसअघि गएको वर्ष मेमा टिभी अभिनेता नकुल मेहता पनि बैंक फ्रडको शिकार भएका थिए । उनको एकाउन्टबाट पनि पैसा ट्रान्सफर भएको थियो ।
Previous Post२९ असारमा हेरौं ! कस्तो होला ऋषिको ‘ड्रिम गर्ल’ ? Next Post‘कृ’ निर्मात गिरी क्षतिपूर्ति दिन तयार !